Samachar Batika || News from Nepal » पानीमा रुझ्दै आफ्नो प्रिय साथीलाई बिदाई गर्न आइपुगे बलिउड सेलिब्रेटी … तस्वीरहरू हेर्नुहाेस
पानीमा रुझ्दै आफ्नो प्रिय साथीलाई बिदाई गर्न आइपुगे बलिउड सेलिब्रेटी … तस्वीरहरू हेर्नुहाेस
लिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको अन्तिम बिदाईको तयारी भइरहेको छ । मुम्बइमा यतिबेला पानी परिरहेको छ । आफ्नो साथीलाई अन्तिम बिदाई गर्न र उनको परिवारलाई सान्तवना दिन बलिउडका सेलिब्रेटीहरु उनको घर ब्रान्द्रा अपार्टमेन्टमा आइपुगेका छन् ।
उनको फिल्म ‘छिचोरे’मा उनले आ त्मह त्या गर्नु हुदैन भनेर सन्देश दिएका थिए । “मैले छोरालाई भनेको थिएँ कि जुन दिन तेरो छनौट हुन्छ, बुबा र छोरा बसेर उत्सव (celebrate) मनाऊँला । तर यो त भनेकै थिएन कि यदि छनौट भएन भने के गर्ने ।
हामी सबै गलत गर्दैछौं । सफलता पछिको योजना त सबै सँग हुन्छ, तर यदि गल्तीले असफल भई हालियो भने, विफलतासँग कसरी व्यवहार गर्ने कसैले यसबारे कुरा नै गर्न चाहँदैन ।
छोरा, राम्रो अंकहरू ल्यायौभने, यो कलेजमा भर्ना पाईनेछ, यो कोर्स गर्यौ भने, यो रोजगार पाईनेछ । अरे यार, १० लाख विद्यार्थिहरू परीक्षामा बस्छन्, त्यसमध्ये १० हजार मात्र छानिएका हुन्छन्, बाँकीका ९लाख ९० हजार बच्चाहरु ? तिनीहरूलाई थाहा नै छैन कि अब के गर्ने ?
उनको फिल्मको यो डाइलगलाई बिर्सदै उनले यो कदम चाले । उनलाई अन्तिम बिदाई गर्न को को आए ? हेर्नुहोस तस्विरहरु …
अभिनेत्री कंगना रनावतले सुशान्तको नि’धनमा प्रश्न उठाएकी छिन् । इन्टाग्राममा एक भिडियो जारी गर्दै उनले सुशान्तको नि’धनप्रति प्रश्न उठाएकी हुन् । इन्टाग्राममा लाईभमा आएर उनले भनिन्, “धेरै मिडिया तथा चलचित्रकर्मीले मानसिक स्वास्थलाई लिएर बिचरा भनेको पाए ।
बाचुँञ्जेल कहिल्यै उस्को कामको प्रशंशा गरेउ ? उस्लाई कहिले अघि बढ्न प्रेरित गर्यौं ? फिल्मी दुनिँया भन्दा बाहिरको परिवारबाट आएर उसले गरेको सं’घर्षको बारेमा कसैले सकरात्मक रुपमा लेख्यौं ? परिवारबादलाई मात्र बलिउड देख्ने कलाकारले अहिले मेन्टल हेल्थ भन्दै सहानुभुति दिएको फिटिक्कै सुहाएन ।
प्रकाशित मिति १ असार २०७७, सोमबार १४:४०